China European Road Transport-Suzhou Sohologistics CO ။ , LTD ။
China-Europe international road transportation is the new logistics mode between China and Europe after air, sea and railway transportation. It is across the Eurasian continent through China's horgos port, Passing By kazakhstan, Russia, Belarus and Poland to Germany, the heartland of Europe.
Sohologistics သည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုတရုတ်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် တင်၍ ၁၂ ရက်သာကြာသောဥရောပ - ဥရောပအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဝေးပြေးလမ်းမကြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြင့်ဥရောပတိုက်ကြီးတစ်လျှောက်လုံးသို့သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်သည်။
တရုတ် - ဥရောပအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက်အားသာချက်များနှင့်စျေးကွက်တောင်းဆိုမှုများ
၁။ ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချိန် ၁၀ ရက် (သို့) လျော့နည်းခြင်း
၂။ လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်တစ်အိမ်မှတစ်အိမ် ၀ န်ဆောင်မှု၏ ၅၀% ခန့်စုဆောင်းခြင်း
3. Taking 45ft container for whole process door-to-door transportation without changing containers. By Transport International Routier customs clearance system greatly saves the transportation time
အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များ၊ E-commerce ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဘက်ထရီပါသည့်ထုတ်ကုန်များ၊ အပိုပစ္စည်းများနှင့်အစရှိသည်တို့ဖြစ်သည်။
အကောက်ခွန်ကြေငြာခြင်း၊ အကောက်ခွန်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်တရုတ် - ဥရောပအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက်အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းမှုပြုလုပ်နည်း။
Transport International Routier for transit business, convenient and fast, is widely used for China-Europe international road transport, which only requires make declaration on POL and deal with custom clearance on POD.
ဘယ် incoterm ကိုတရုတ် - ဥရောပအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက်အသုံးပြုပါသလဲ